(NorSom Magazin): Wuxuu Norway kusoo galay qoxootinimo, maantana waa bilyan dheer: Ogow qaabka uu lacagtaas ku sameeyay. - NorSom News
Home NorSom Magazin (NorSom Magazin): Wuxuu Norway kusoo galay qoxootinimo, maantana waa bilyan dheer: Ogow...
Foto: Lebera/my call
Rasiah Leon waxa uu Norway kusoo galay qoxootinimo sanadkii 1996, maantana waxa uu kamid yahay dadka Norway ugu taajirsan. Hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa 3 bilyan iyo dheeri, waana qofka soo galootiga ah ee Norway ugu taajirsan.
NorSom Magazin(Halkan ka akhri) qisadiisa iyo sida uu lacagtaas tirada badan ku sameeyay
Waxaa ii muuqday suuq aysan arkin shirkadaha kale ee waaweyn ee Norwiijiga ah.
NorSom Magazin kala xiriir: 48680689
Previous articleNorSom Magazin: Jens Mjaugedal: Imaaraatku waxey rabaan inay wiiqaan awooda dowlada dhexe, iyaga oo maamul goboleeyada adeegsanayo
Next articleVideo: Ka qeybqaado gurmadka loo fidinayo walaalaha ku dhibaateysan gudaha Ethiopia
Oljefondet: 2,4 milyan kr ayaa sanduuqa keydka lacagta shidaalka ugu jirto qof kasta oo Norwiiji ah
Darawal Buss: Waxaa shaqada la iiga ceyriyay inaan shitay heeso diini ah.
Maxkamada sarre oo cafisay nin horey loo xukumay danbi la xiriira khiyaano NAV